ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ) တွေ့ဆုံ | ဒီရေ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ) တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဖွား ညီအကို မောင်နှမများ ခင်ဗျား
ယနေ့ ၂၄ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Generation Wave (မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ) မှခေါင်းဆောင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း ကော်မတီဝင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စရပ်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့သည့် ဓါတ်ပုံများကို attached file ဖြင့် မျှဝေ လိုက်ပါသည်။ သိရှိလိုသည့် အချက်များ ရှိပါက
ကိုမင်းရန်နိုင် ၀၉ ၅၁၅၅၃၉
ကိုဘိုဘို ၀၉ ၄၂၁၀၈၇၉၉၂
ကိုမိုဃ်းသွေး ၀၉ ၄၂၁၀၈၇၉၉၃
မဘုတ်ဘုတ် ၀၉ ၄၃၁၁၈၉၇၇
ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အဖွဲ့လိုက် ဓါတ်ပုံတွင် ပါဝင်သူများ၊
ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဘုတ်ဘုတ်၊ မိုဃ်းသွေး၊ ဦးအောင်မင်း၊ မင်းရန်နိုင်၊ ဘိုဘို၊ ဦးတင်မောင်သန်း
We,Generation Wave met with Minister U Aung Min (Member of Peace Process Working Committee)
today, June 24, 2012 Sunday. We discussed about ongoing Peace Process. If you have further more questions,
please contact us with following phone numbers.
In Group Photo: Left to right,
U Hla Maung Shwe, Bote Bote,Moe Thway, U Aung Min, Min Yan Naing, Bo Bo, U Tin Maung Than.
Min Yan Naing 09 515539
Bo Bo 09 421087992
Moe Thway 09 421087993
Bote Bote 09 43118977